I-Arch Banner Stand
Indawo ye-Rainbow Arch
I-Arch banner stand iyisixazululo esidonsa amehlo kakhulu futhi esiphathekayo somcimbi wangaphakathi noma wangaphandle.LokhuIkhothamo lomcimbi ophathwayoingasetshenziswa yodwa noma ama-arch banner amabili ndawonye njengekamelo, atholakala ngamasayizi amathathu.Kufika ku-8 ama-pcsifulege lolwandles angabelana ngezisekelo ezifanayo njengenketho.
Izicelo:Ukukhangisa Kwangaphakathi Nangaphandle, Imikhosi, Imibukiso, Imibukiso, Imicimbi, Amaphromoshini, Imishado, Amaphathi, okudayisa nezitolo, Izimakethe, Imibukiso yezimoto njll.
I-arch stand ingasetshenziswa ngabanye, isebenze njengesithunzi sokukhushulwa kwemoto noma isango elamukelekayo lesitolo
Ukusebenzisa ezimbiliUmcimbi Archesbawela ndawonye, ​​Bazosebenza njengetende emcimbini wangaphandle, noma bakhe indawo yezingxoxo zebhizinisi embukisweni wokuhweba.
Okwengeziweamafulege olwandleingafakwa esisekelweni sensimbi se-Arch stand, yenza isango lakho le-arch likhange nakakhulu futhi ubonise ulwazi oluthe xaxa lokukhangisa oluvela ezindaweni ezahlukene zokubuka.
Usayizi omkhulu wokubonisa ohlangothini olulodwa noma ukuphrinta kwezinhlangothi ezimbili.Imidwebo yendwangu eshintshashintshayo ikuvumela ukuthi uvuselele noma udale imilayezo emisha kalula kumcimbi olandelayo.
3 osayizi ongakhetha, 3m ububanzi, 4m ububanzi kanye 5m ububanzi.Umumo ophezulu wesibhengezo se-arch ungaba mncane futhi ube banzi ngokushintsha ibha yokusekela ephezulu.
Isigxobo sefreyimu esiyinhlanganisela yekhabhoni, ubude besigaba ngasinye sibe ngu-1.15m futhi sixhunywe ngentambo yokunwebeka engagwema ukulahleka futhi yenze kube lula ukufakwa, Lesi sisindo esilula, ifreyimu eguquguqukayo ingahlanganiswa kalula ngemizuzu ngaphandle kwamathuluzi noma izitebhisi.
Izinhlobo ezingu-2 eziyisisekelo ezitholakalayo, isisekelo sensimbi ye-Premium noma isisekelo sikakhonkolo, kuncike kusabelomali sakho nendawo yesicelo.Isikhwama sesisindo samanzi singengezwa ukuze kube nokuzinza okungcono.
I-premium metal base weight 13kg, ngaphandle kwe-beaflag eyengeziwe efakiwe, sinamaphoyinti okuthengisa amasha: isondo kwelinye icala kanye nembobo yokubamba ngakolunye uhlangothi;zonke izigxobo / isisekelo sensimbi / isikhwama samanzi / isibhengezo esiphrintiwe singapakishwa ndawonye esikhwameni sokuthwala esifika nesisekelo sensimbi, nje ukubamba kanye nesondo ngaphandle, kusebenza njengekesi lesudi, kulula futhi kulula ukulihambisa.
Kuphawuliwe:Uma usebenzisa i-Arch banner Outdoor, kuphakanyiswa ukuthi isetshenziswe emoyeni ongaphansi kweleveli 5
(1) Usayizi omncane wokupakisha kodwa indawo enkulu yokubonisa, ubude bokuthutha buyi-1.15m kuphela
(2) Izigxobo zixhunywe ngezintambo ezinwebekayo, kulula ukuzihlanganisa
(3) Kulula ukusetha futhi Azikho izisetshenziswa ezengeziwe ezidingekayo.
(4) Isisekelo esihlukile nesikhwama samanzi sezengezo siyatholakala
(5) Ifulegi lingabelana ngesisekelo esifanayo ukwenza idokodo lakho likhange kakhulu
(6) Iza nesikhwama sokuthwala, isisekelo sensimbi esinamasondo, ukuze kube lula ukuhamba nokugcinwa
Ikhodi yento Usayizi Bonisa Ubukhulu Usayizi wokupakisha
UMKHOSI-3 S 3.0*2.5m 1.2m
UMKHOSI-4 M 4.0*2.9m 1.2m
UMKHOSI-5 L 5.5*3.3m 1.2m
Okwedlule: Isibhengezo Sekhanda Letende
Olandelayo: Isibhengezo sase-Bali
UMKHIQIZO ODAYISWA OKUSHISAYO
Isistimu yesibhengezo esikhulu